TPS နီပေါ | သင့်ရဲ့ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်? | USAHello
TPS နီပေါ - သင့် TPS ကုန်ဆုံးတဲ့အခါသင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
ဤတွင် TPS အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နီပေါကနေလူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်.
ဓာတ်ပုံ: နယူးယော့၏အသံများအဘို့ Anuz Thapa
TPS နီပေါ - လာသောအခါငါ၏အ TPS သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါဘူး?
Update ကိုနိုဝင်ဘာလ 4, 2019: TPS for Nepal has been extended.
The US government publishedanotice in the Federal Register. The notice says that TPS for El Salvador, ဟေတီ, နီကာရာဂွာ, ဆူဒန်, Honduras and Nepal is extended until TPS court cases have been settled. If you have TPS for Nepal, your TPS documents are automatically extended to January 4, 2021.
This notice is because ofacourt case. သင်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုသိရန်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အဘို့စောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီကျနော်တို့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်အဖြစ်ဒီစာမျက်နှာကို update ပါလိမ့်မယ်.
The notice says that the extension is automatic. အသေးစိတ်ရှာဖွေနေသိမ်းဆည်းထားပါ ဒီ USCIS စာမျက်နှာ.
အဘယ်အရာကိုငါ့အအလုပျအကိုငျနှငျ့ ပတျသကျ. ခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်းများ (EAD)?
သငျသညျကောင်းသောအကြောင်းရင်းရှိပါက USCIS တစ်နှောင်းပိုင်းကမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ် re-မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံစေခြင်းငှါ. ဒီကိုသွားပါ USCIS စာမျက်နှာ နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “နှောင်းပိုင်းငြ်ူ့ခင်း” သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်ထွက်ရှာရန်.
သင့်ရဲ့ TPS ကုန်ဆုံးသည့်အခါ, သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာ status ကိုပြန်ရှေ့မှာဘာကိုသွားပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏အဆင့်အတန်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သို့မဟုတ်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထားခဲ့နိုင်သည်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ status ကိုချိန်ညှိဟုခေါ်သည်.
သင်လုပ်နိုင်လျှင်, လုပျဖို့အကောင်းဆုံးအရာရှေ့နေနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ပါသည်. သင်တို့အပေါ်မှာတန်ဖိုးနည်းရှေ့နေများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ImmigrationLawHelp.com ဒါမှမဟုတ်အပေါ် ဆေးခန်းဥပဒေရေးရာ directory ကို.
သငျသညျလူတစ်ဦးအတွက်ရှေ့နေနှင့်တွေ့ဆုံရန်မနိုင်လျှင်, LegalZoom သင်တစ်ဦးရှေ့နေနဲ့တနာရီကြာအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးငါပေးမည်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်အနေနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်လက်ထောက်နှင့်အတူတစျနာရီများအတွက်အွန်လိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျခွငျးကိုဆိုလိုသ. သင်သည်ဤပြုလျှင်, သင်လိုအပ်လျှင်သင်သင်တို့အဘို့အနက်ကိုဘော်ပြမှရှေ့ဆက်အချိန်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏အဆင်သင့်သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးရှိသေချာအောင်. သင့်ရဲ့တဦးတည်းနာရီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးနောက်, သူတို့သင်တစ်ဦးပေးဆောင် client ကဲ့သို့ sign up ကိုရှိသည်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. သင်ရှေ့နေများအတွက်ဆပ်ဖို့ပိုက်ဆံရှိမဟုတ်လျှင်ဘာမှလက်မှတ်ထိုးမနေပါနဲ့.
များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီရှေ့နေနှင့်တွေ့မနိုင်ကြှနျုပျတို့သိ. ဤတွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများနားလည်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမဖြစ်ပေမယ့်အစားသတင်းအချက်အလက်သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုစဉ်းစားပါကကူညီမှ.
Immi ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာ options များနားလည်ကူညီပေးသည်. သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာရန်သင့်အားလမ်းပြ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းစိစစ် tool ကိုသုံးနိုငျ. သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလူဝင်မှုအဆင့်အတန်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်ကြည့်ရှုရန် immi အင်တာဗျူးကိုယူ. Immi ရဲ့ဥပဒေရေးရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်လွှဲပြောင်းအကြံပေးချက်ကိုအစဉ်အမြဲအခမဲ့များမှာ.
အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ (USCIS) ကပြောပါတယ်:
"TPS အရာကိုပြုသင့်သည်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ status ကိုဦးတည်သွားစေသို့မဟုတ်အခြားလူဝင်မှုအခြေအနေမပေးပါဘူးတဲ့ယာယီအကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်, TPS များအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေးထံမှသင်တို့တားဆီးမထားဘူး:
Non-Immigrant status ကိုလျှောက်ထား
TPS status ကိုထိန်းညှိဖို့တစ်အရည်အချင်းများစဉ်းစားသည်ရင်တောင်, သငျသညျလျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသူဖြစ်ရမည်. သင်တရားဝငျကွပါလျှင်အစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်ထားများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းငှါ. ဤရွေ့ကားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့်မိသားစုသို့မဟုတ်သင့်အလုပ်၏ဖြစ်နိုင်သည်. ဘယ်လိုထွက်ရှာမည် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထား.
သူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြောင့်မှညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ခံစားခဲ့ကြရသည်ဖြစ်သောကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူပေါင်းကာကွယ်မှုရှာကြံ United States ကိုလာ:
TPS ကိုင်ဆောင်သူခိုလှုံခွင့်အဆင့်အတန်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, သူတို့ကဒီမှာတစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းခဲ့ကြပါပြီအထူးသဖြင့်လျှင်. သငျသညျထက်နည်းတစ်နှစ်ဒီမှာဖြစ်ရပြီဆိုပါက, သင် ... သင့်တယ် NOW ကကျင့်သုံးပါ. သို့သော်, သင် USCIS မကြာသေးမီကခိုလှုံခွင့် applications များလုပ်ငန်းများ၌ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားပြီကိုသိသောအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ယခု, သူတို့ပထမဦးဆုံးလတ်တလော applications များပြန်လည်သုံးသပ်နေကြသည်. သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီးတာနဲ့, သင့်ရဲ့အမှုကိုကြားမီကအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဒါကြောင့်, သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီဘူးဆိုရင်မဟုတ်ရင်သင်သည်သင်၏အမှုကိုကြားရှိခြင်းအန္တရာယ်များနှင့်ထို့နောက်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသောကွောငျ့သငျသညျခိုလှုံခွင့်အရှိဆုံးသာလျှောက်ထား. သင့်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ပုံစံ (ဒီဥပဒေရေးရာပုံစံဖြစ်ပြီးသင်ပုံစံဖြည့်စွက်ကူညီပေးဖို့ရှေ့နေခဲ့လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်).
သင် U.S ခဲ့ကြလျှင်. တစ်ဦးထက်ပိုသည့်နှစ်, သင်ဆဲနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ပေမယ့်ပိုပြီးခက်ခဲပါလိမ့်မည် (ထိုသို့တစ်ဦးခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရပြီးသားခဲယဉ်းသည်).
သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ထားဘူးဆိုရင်, သင်တစ်ဦးလိုလားသူ Bono ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ် (အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်အခမဲ့ရှေ့နေ) သင့်ကိုကူညီရန်. သင်တစ်ဦးလိုလားသူ Bono သို့မဟုတ်ရက်နေ့တွင်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ImmigrationLawHelp.com ဒါမှမဟုတ်အပေါ် ဆေးခန်းဥပဒေရေးရာ directory ကို.
အခြားအကာကွယ်ပေး status ကိုလျှောက်ထား
တချို့က TPS ကိုင်ဆောင်သူအထူးဗီဇာအောက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်စေခြင်းငှါ. လူကုန်ကူးမှု၏သားကောင်များအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရှိပါတယ်, ထိခိုက်အိမ်ထောင်ဖက်, သည်အခြားပြစ်မှုများ၏ကလေးများသို့မဟုတ်မိဘများနှင့်သားကောင်များ.
သငျသညျအမြိုးသမီးတဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်မှုအထူးဗီဇာများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေခြင်းငှါ, စဉ်းစားပါလျှင်, အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်, သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ Advocacy Project.
သငျသညျအသကျရှငျဘယ်မှာပေါ် မူတည်., သငျသညျအခြေအနေပြောင်းလဲမှုကိုလျှောက်ထားနိုင်မည်အကြောင်း သငျသညျစာရွက်စာတမ်းမရှိဘဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲသို့ဝင်လျှင်ပင်. ရရှိမှု TPS အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဝန်ခံချက်အဖြစ်ရေတွက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သင်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်တရားနေဖို့ကူညီရန်အဘို့အဒါဟာဖြစ်နိုင်. သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင် USCIS နှင့်အတူကြာမြင့်စွာဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားရပါလိမ့်မယ်. သင်ပြုအလုပ်မျိုးပေါ် မူတည်., သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သင်တစ်ဦးကိုအထူးဗီဇာသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုမိန့်မရနိုင်မည်အကြောင်း. သူတို့သည်သင့်ကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်သူတို့အထဲကရှာတွေ့မှယခုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်သင့်တယ်. အလုပ်ရှင်များ USCIS ထံမှနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရှာတှေ့နိုငျ. သို့သော်, ပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်မားကျွမ်းကျင်နေသောသာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့ကိုစပွန်ဆာမည်သူအလုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေနိုင်ကြသည်. ဤရွေ့ကားဆရာဝန်များကပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ,, အင်ဂျင်နီယာများ, နှင့်နည်းပညာအလုပျသမား. သင်တစ်ဦးအခြေခံသို့မဟုတ် entry ကိုအဆင့်ကိုအလုပ်မှာအလုပ်မလုပ်ခဲ့လျှင်, ဒီ option ကိုအဘို့သင့်အလုပ်ရှင်ကမမေးကြဘူး.
သငျသညျစာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲတိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင်ပါလျှင်, သငျသညျပြည်နှင်ဒဏ်ပေးသို့မဟုတ်အဖမ်းခံရခံရမည့်အန္တရာယ်. ဒီနေရာတွင်ထိန်းသိမ်းခံနေကြပါလျှင်သင်သည်သင်၏အခွင့်အရေးနှင့်ဘာလုပ်ဖို့နားလည်ကူညီရန်အတွက်နောက်ထပ်အချက်အလက်များအားနှင့်အတူအချို့သောစာမျက်နှာများ.
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 2131 Leroy နေရာ, ဘ, ဝါရှင်တန်, DC က 20008.
ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်: (202) 667 4550.
နီပေါသံရုံးကိုလည်းမှာနယူးယောက်စီးတီးရှိတစ်ဦးကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှိပါတယ်: 216 အီး 49 Street,, 4ကြိမ်မြောက်ကြမ်းပြင်, နယူးယောက်, NY10017. ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်: (917) 675-6783.
သငျသညျ TPS ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်ထောက်ခံမှသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေနေပါသည်?
အဆိုပါ ဘာသာပေါင်းစုံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးညွန့်ပေါင်းအရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်း သငျသညျအရေးယူကူညီရန်.
သင့်ရဲ့ TPS ကုန်ဆုံးနေသည်?
၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူပေးအပ်သတင်းအချက်အလက် CWS နှင့် Clinical. ဒီစာမျက်နှာပေါ်ရှိအခြားအချက်အလက်များကိုထံမှလာ အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန, အဆိုပါ ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်မည်, USCIS နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.